HomeWararka CiyaarahaGuul-daradii Chelsea kasoo gaartay Kooxda Manchester City iyo Xaqiiqooyinkii laga diiwaan-galiyay
September 25, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Manchester City ayaa guul ka gaartay kooxda Chelsea waxayna mar kale dib boorka iskaga jaftay iyadoo muujineysa in ay difaacaneyso Horyaalka Premier league.
Waxaan dib u eegeynaa Xaqiiqooyinka laga diiwaangaliyay kulankan.
Pep Guardiola ayaa diiwaan galiyay guushiisii ​​221 -aad ee tartamada oo dhan isagoo ah maamulaha Manchester City; rikoor cusub oo kooxda ugu guulaha badan tababaraha, isagoo ka hormaraya Les McDowall (220 guul).
Manchester City ayaa badisay kulamadii ugu dambeeyay oo ay martida u ahayd kooxda Chelsea markii ugu horeysay tan iyo bishii Janaayo 1955.
Chelsea ayaa laga badiyay afar ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Man City (badin 3), waana inta ay guuldarreysatay 38-dii kulan ee hore marka la isku daro (badin 21 bar-baro 13 Laga badiyay 4).
Man City ayaa laga dhaliyay kaliya hal gool lixdii kulan ee Premier League ee ay ciyaareen xilli ciyaareedkan – waana intii ugu yareyd ee ay geeyaan marxaladdan horyaalka xilli ciyaareedkooda.
Gabriel Jesus ayaa dhaliyay goolkiisii ​​52 -aad ee Premier League, iyadoo Manchester City aysan waligeed guuldaro kala kulmin tartankii uu goolasha ku dhaliyay (P44 W42 D2) – wuxuu sii dheereystay rikoorka kulamadii ugu badnaa ee la dhaliyo iyadoo aan marnaba laga badinin hal koox (44 kulan) .
Gabriel Jesus ayaa noqday ciyaartoygii shanaad ee dhaliya 20+ goolal oo guul ah Premier League kooxda Manchester City, ka dib Sergio Agüero (48), Raheem Sterling (23), Yaya Touré (22) iyo David Silva (20).